Madagasikara : Rivo-piainana hafahafa tamin’ny faha-50 taonan’ny fahaleovantena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2018 19:16 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, Français, Español, English
(Marihina fa tamin'ny 24 Jona 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Faha-50 taona ny fahaleovantenan’i Madagasikara ny 26 Jona 2010, ary efa nanomboka sahady ny fety. Na dia nisy aza ny afisy lehibe mampiseho ireo mpihira malaza iraisam-pirenena ho an’ny fampisehoana dia toa ohatran’ny tsy tena fety ny rivotra niainana, noho ny fisalasalana ara-politika ary ny fahasarotana ara-toekarena vokatry ny krizy izay naharitra 18 volana.
Fomba fanao mahazatra ao Madagasikara amin’io vanimpotoana io, ny manangan-tsaina sy mandrehitra arendrina ho fanomezam-boninahitra ny andron’ny fahaleovantena kanefa tsy dia nahitana saina firy tamin’io taona io noho ny antony isankarazany. Mbola maloka indray ny rivotra niainana noho ny fahafatesan’ny mpandeha an-tongotra iray nofaohin’ilay mpitondra môtô, mpitarika ireo fiaran’ny mpitondra ny filoham-pirenena.
Tsy isalasalana fa nameno ireo fampahalalam-baovao mahazatra ny fankalazana, nefa maro tamin’ireo bilaogera no nanontany tena raha toa ka rariny ny fankalazana lafo vidy tamin’ny fotoanan’ny fisalasalana ara- toekarena sy ny tsy fahampian-tsakafo betsaka tany amin’ny faritra atsimon’ny firenena. Maro ny Malagasy no nankasitraka ny fampisehoana, fialam-boly nahafinaritra manoloana ny rotoroton’ny fiainana andavanandro.
Bilaogera maro no nanome ny heviny momba izany. Nampahatsiahy ireo teny malaza nataon’ilay mpitondra fanjakana Romana iray i Ndimby ary nanontany tena hoe nankaiza ireo fampanantenana tamin’ny fampihenana ny fandaniam-bolam-panjakana:
Mampanontany tena hoe nankaiza ireo teny filamatra lehibe navoaka teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey nanohitra ny fandaniana ny volam-bahoaka tamin’ny zava-poana ? Tsy isalasalana fa izany no tsy maintsy nataon’ilay DJ Andry TGV manokana mba ahafahany miavaka eo amin’ny fiainam-pirenena. Io izany no fotoana tsara hampatsiahivana azy ireo tenin’i Ciceron hoe : « Arakaraka ny hahazoana toerana ambony kokoa no hanehoana fanetren-tena bebe kokoa».
Arendrina malagasy, sary ChronoWizard tao amin'ny Flickr, nampiasana lisansa CC
Nilaza tao amin’ny pejy Facebook-ny i Randy fa tsy anà antoko politika ny fetim-pirenena ary faly izy nahita ireo mpanakanto vahiny tonga nanome voninahitra an’i Madagasikara :
Nanohina ny fo tokoa ny nahita ilay mpiangaly rap Amerikana Big Ali niditra teo amin’ny lampihazo nitafy ny sainam-pirenena Malagasy. Tsy nisaraka taminy mihitsy ilay izy nandritra ny fampisehoana. Natao ho an’ny rehetra ny fetin’ny fahaleovantena. Ny sainam-pirenena, tahaka ny hira faneva ihany koa dia anisan’ny andrimpanjakana manan-kasina ao amin’ ny Repoblika ka tokony hajain’ny olom-pirenena tsirairay tsy miankina amin’ireo mpitondra azy.
Arendrina hafa, avy amin'i ChronoWizard: http://www.flickr.com/photos/chronowizardmg/
Raha nanakaiky ny fetim-pirenena dia maro ireo raharaha momba ny heloka bevava nifandraika tamin’ireo korontana tamin’ny taon-dasa no niakatra fitsarana tao Antananarivo tamin’io fotoana io.
Hatramin’ny tapaky ny volana Mey 2010, mpanao gazety miisa 10 tao amin’ny onjam-peo no nogadraina. Raha maro ireo bilaogera no nisaintsaina ny dikan’ny faha-50 taonan’ny fahaleovantena ho an’ireo firenena maro miteny Frantsay, i Basy vava kosa dia nitodika tamin’ireo raharaha anatiny ary nanontany tena tamin’ny feo mafy raha afaka lazaina ho ‘’mahaleontena’’ ny rafi-pitsarana eto Madagasikara.
Ho famintinana, tamin’ity taona 2010 manan-danja ity sy araka ny fahitana ireo korontana nisy teo aloha, dia nanontany tena i Mitiyu raha toa ka tena mendrika ho an’ireo firenena toa an’i Madagasikara tokoa ity ‘’demaokrasia’’ ity izay takian’ireo mpanao politika Malagasy isanisany ho toy tanjony faratampony:
Matetika resahina foana ny momba ny fifidianana, ho fanehoana ny demaokrasia. Raha dinihina ny olan’ny fifidianana sasany sy ny fiantraikan’izany ara-tsosialy, ara-toe-karena na ara-politika tamin’ireo fifidianana sasany teto Madagasikara dia mety hanontany tena ihany isika raha toa ka ilaina marina ny demaokrasia satria raha ny marina dia toa sasana fotsiny ny ati-dohan’ny vahoaka « voarebireby », hazavaina amin’izy ireo fa olona sahirana ry zareo ary hangatahana aminy ny fidinana an-dalambe amin’ny anaran’ny demaokrasia.
Miaraka amin’ny demaokrasia, resahana ihany koa ny fahalalahana maneho hevitra. Moa ve misy eto Madagasikara tokoa ity fahalalahana maneho hevitra ity sa ve tsy maintsy miafina hatrany ao ambadiky ny mari-panondroana hafa na eo ambanin’ny fitsipiky ny matoandahatsoratra napetraky ny lehiben’ny mpanao gazety mba hanehoana hevitra am-pilaminana kokoa ?